Ciidamada Somaliland oo dhaawac daran ugaystay wariye dhawaan soo duubay Odayaal Dhulbahante ah oo kulan kuyeeshay Laascaanood,(READ MORE »).
May 14, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Somalia, Somaliland, Wararka Maanta 3
Ciidamada amniga maamulka Somaliland ayaa xalay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku dhaawacay suxufiga Cabdiraxmaan Kayse Tungub.
Weriyaha oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Kayse Tungub ayaa maalmo ka hor shir jaraa’id ka duubay odayaal ku sugan Laascaanood kuwaas cambaareeyay xariga xildhibaan Dhakool loogu geystay magaalada Hargeysa.
Ciidamo katirsan Somalilnad ayaa la sheegay in Xalay ay beegsadeen wariyahaan sida ay inoo xaqiijiyeen dad kusugan Magaalada.
Mid kamid ah saaxiibadiis ayaa sheegay in suxufiga oo la dhaawacay fiidnimadii xalay haatan lagu dabiibayo isbitaal ku yaalla magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Sidoo kale wuxuu sheegay in askar ka tirsan kuwa Somaliland ay rasaas si bareer ah ugu fureen suxufigaasi xilli uu ka soo baxay goob uu ku afuray.
Balse ciidamada ayaa sheegay in rasaasta ay rideen kadib markii uu carar isku dayay suxufiga oo ay doonayeen in ay xiraan.
ALLAHU AKBAR, caafimaad baan jirin waxaas oo tacadiyo ah iskama imaan.
Reer lascanoodow,sidaan Aya dab iyo Dil layskudaridona.saca bii saca.umad ogolateey ina lagumeysto wax daran ayu lakulmi.
Laascaanood”: Maanta waxay u baahan tahay (Rag iyo Rabi)?…Waxani ma hagrashaa? Ma hayn la aan baa? Ma warbaan loo hayn? Ma cid ayaa looga hamranayaa? Ma hawl baan laga lahayn? Ma sidaas ay ku haboontahay?
Soomaalidu waxa ay tidhaahdaa “qawda maqashii waxna ha u qaban” waxa kale oo ay tidhahdaa “ninka aan quus aqoon naftiisa ayaa quus ah” waxa kale oo ay tidhaahdaa “dibiga wardheer dhegihiisu wanaag bay maqlaan laakiin indhihiisu wanaag weligood ma arkaan” waxaa kale oo ay tidhahdaa “ileen adhi qulux kama ilbaxo”.(Tol la,aa)